हेटौँडाका यी बालकले जब आँखा देखे तब छमछमी नाचे – Kalika News
हेटौँडाका यी बालकले जब आँखा देखे तब छमछमी नाचे
२१ असार २०७६, शनिबार १०:५० , मा प्रकाशीत
भाईरल भिडियो भित्रको कथा
असार २१ -संसारमा मानिसहरुका लागि आफनो शरिरको हरेक अंगहरु निकै महत्वपुर्ण हुन्छ । एक अंग मात्र नभए पनि त्यसले जीवनमा असहजता भने पक्कै ल्याउँछ । त्यसमा पनि संसार देख्न आँखा त्यसमा असक्षम भए त्यसले त जीवन झनै कष्टर बनाउँछ । हो शरिरिकका कुनै पनि अंग नहुँदा त्यसले असहजता त ल्याउँछ तर जीवन नै अपुर्ण भने नबनाउँला किनकी जीवन जिउँने हरेकमा इच्क्षाशक्ति र द्धृणता चाहिन्छ । तथापी त्यही गुमेको अंगमा खुसी फर्कदा कस्तो होला त्यो पक्कै त्यसको अभाव भोगेकाहरुलाई नै थाहा हुन्छ यस्तै खुसी भोगेका छन् हेटौंडा उपमहानगरपालिका १३ का रोशन थिङले ।
जन्मदा सबै ठिक भए पनि पछि अकस्मात आँखाको दृष्टी गुमाउँदा उनलाई निकै कष्ट भएको थियो । कक्षा २ मा पढुदा पढ्दै आँखाको ज्योती गुमाएका रोशनको जब हेटौँडा सामुदायिक आँखा अस्पतालमा आयोजित तीन दिने आँखा शिविरमा शल्यक्रिया भयो तब उनले लामो समय गुमाएको ज्योती फिर्ता पाए । उनको आँखाको शल्यिक्रिया सन्दुक रूइतको टिमले गरेको थियो । जब रोशनले आफनो आँखाले गुमाएको ज्योती फिर्ता पाए तब उनको जीवनमा एउटा रंग नै भरिदियो । जब उनले यो संसार फेरी देखे तब उनी छमछमी नाचे । आफनो आँखाको ज्योती फकाईदिने डाक्टर सन्दुक रूइतलाई उनले माया गर्दै गालाभरी चुमे ।
यतिबेला उनको यही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल बनिरहेको छ । उक्त भिडियो हेर्दा गह भरिन्छ पनि । मोतिया बिन्दुको कारण आँखाको ज्योती गुमाएका रोशनको शल्यिक्रियापछि ज्योती फर्कदा उनको खुसीको कुनै सिमा नै छैन । आँखाको पट्टी खेलिदिएपछि उनले पहिलो पटक डाक्टर सन्दुक रूइतलाई ने हेरे । तब उनको खुसीको सिमा नै रहेन । उनी चिच्याए , खुसीले रोए । उनी जति बेला डाक्टर सन्दुक रूइतलाई भेट्छन् तब रोशनले अंगालो हाल्दै माया गर्छन् । आफनो आँखाको ज्योती पाएसंगै फेरी बिद्याल जाने उनको ठुलो रहर छ । शिविर संचालन गरेर कयौँको ज्योती फकाईदिएका डाक्टर सन्दुक रूइतसहित टिमको पनि यतिबेला चौतर्फी प्रशंसा पनि भईरहेको छ ।
डा.सन्दुक रुईतले जन्मजात दृश्यविहिन १३ वर्षका रोशन थिङको आँखा प्रत्यारोपण पछि जे देखियो!!
डा.सन्दुक रुईतले जन्मजात दृश्यविहिन १३ वर्षका रोशन थिङको आँखा प्रत्यारोपण पछि जे देखियो । आँखा देख्न नसक्ने एउटा भाईले जब पहिलो पटक आँखा देख्न अनि संसार हेर्न पाउदा कति खुशी हुन्छ यो छोटो भिडियो मार्फत कैद गरिएको उसको उमंग र हर्षका दृश्य । धन्यवाद Dr Sanduk Ruit : Curing blindness in the developing countries. Dr. Sanduk Ruit #lifeisbeautifulयो पेज Like र Share गर्न नबिर्सनु होला !!!
Posted by OnlineJhapa on Thursday, July 4, 2019